Ny lalao tetikady 10 tsara indrindra ho an'ny iPhone | Vaovao IPhone
Ny lalao tetikady 10 tsara indrindra ho an'ny iPhone
Cristina Torres sary placeholder | | Lalao IPhone
Ao amin'ny tontolon'ny iPhone, manana andraikitra lehibe hatrany ny lalao. Raha ny marina dia tsy vitsy ireo orinasan-dalao horonantsary kilasika izay mianatra ny fomba hidirana amin'ny sehatry ny smartphone miaraka amin'ny fangatahana rehetra mitranga amin'izao sehatra izao. Saingy mazava ho azy, na dia ao amin'ny App Store aza no ahitantsika ny tolotra isan-karazany, ny iray amin'ireo manintona ny saina indrindra dia ny an'ny sehatry ny lalao paikady, ary izy ireo indrindra no horesahintsika manaraka satria anio dia asehontsika inona avy ireo Lalao tetikady 10 tsara indrindra ho an'ny iPhone.
Ny sasany amin'ireo izay ho hitanao ato amin'ireto lisitra manaraka ireto dia ireo izay ho fantatrao, satria izy ireo dia avy amin'ny lisitra be alaina indrindra. Ny hafa mety tsy dia misy ifandraisany loatra aminao, fa satria tena tsara naoty izy ireo, na satria maro ny mpampiasa no ampirisihina hampiala azy ireo, na satria ny fanavaozana farany dia hita fa nisy famakafakana tena tsara teo amin'ny tsena ho an'ny lalao tetika ho an'ny iPhone avy amin'ny App Store. Ka raha te hanome fanavaozana kely ny lisitrao ianao dia mariho ity manaraka ity izay afaka miaraka amin'ny lisitry ny lalao tsara indrindra amin'ny App Store.
1 Lalao Strategy ho an'ny iPhone
1.1 Miaramila mpiady amin'ny fararano
1.2 Rush Fanjakana Voasaraky ny Sisin
1.6 Mpisolovava an'i Devoly
1.7 Zavamaniry vs. Zombies 2
1.8 Revolisiona sivilizasiôna 2
1.9 Fitokonana voalohany
1.10 Areti-mandringana Inc.
Lalao Strategy ho an'ny iPhone
Miaramila mpiady amin'ny fararano
Raha iray amin'ireo tianao lalao izay fehezinao amin'ny tanàna iray manontolo ianao, ary miatrika sivilizasiona dia mila manandrana ity iray ity. Miorina amin'ny tarana-mpanjaka sinoa, tsy afaka mitombo amin'ny maha-vahoaka anao ianao, na mifehy izay rehetra tafiditra amin'ny iray amin'ireo fanjakana lehibe indrindra, fa miatrika ireo fahavalonao sy mametraka ny fitsipiky ny diplaomasia.
Rush Fanjakana Voasaraky ny Sisin
Raha mbola tsy nanandrana azy ianao dia angamba ny fitadidiana izany no fomba tsara indrindra mamaritra azy Fiarovana amin'ny tilikamboNa dia amin'ity tranga ity aza ny tranga, ny fahavalo ary indrindra ny hetsika, fanovana vitsivitsy no ampiharina mba hahatonga ny ady ho lasa mavitrika kokoa. Ny haavon'ny sary dia iray amin'ireo tsara indrindra ary mieritreritra aho fa sarotra ny mankaleo.
Raha misy iray amin'ny lisitry ny Lalao paikady 10 ho an'ny iPhone anio izay misarika ny saina, ny marina dia ity no lohateny voafidy. Mamela ny zavatra fantatra rehetra sy ny fombany faran'izay kely indrindra amin'ny fikitihana ny piozila tafahoatra izy, miantso ny maro hanandrana refy vaovao izay mihoatra ny kilasika.
Hoy izy ireo tapany faharoa tsy mbola tsara, fa misy ihany ny maningana izay manamafy ny fitsipika, ary ny tantara tany am-boalohany amin'ity tranga ity dia voatazona, saingy miaraka amin'ny fanatsarana ny sary, azo antoka fa azo atao ny misambotra ireo mpihaino taloha sy vaovao.
Angamba iray amin'ireo vitsy izay tsy tokony hatolotra afa-tsy amin'ny taona sasany. Raha tianao ny mitifitra, lalao hetsika ary mazava ianao fa ny scenario tonga lafatra dia ny toerana misy fitaovam-piadiana, heveriko fa tsy maintsy andramanao izany tsy misy fisalasalana. Mazava ho azy, tsy mety amin'ny teti-bola rehetra izy io, farafaharatsiny tsy ho an'ny efa mahazatra antsika ao amin'ny App Store.
Mpisolovava an'i Devoly
Raha mieritreritra an'izany ianao mankaleo ny lalànaMiomàna hiaina toy ny mpisolovava izay manomboka amin'ny rangotra ary mahazo laza sy harena noho ny famahana tranga sy ny fampiharana ireo teknika varotra mihoapampana. Ny fanaingoana ny birao, ny filokana amin'ny tranga vaovao, na ny fiarovana ny anao amin'ny fitaovam-piadiana isan-karazany no ho tanjonao. Ho diso anjara amin'ny fanandramana azy ve ianao?
Zavamaniry vs. Zombies 2
Heveriko fa amin'ity tranga manokana ity dia misy be dia be taratasy. Ny marina dia izy io no iray amin'ireo malaza indrindra ary alaina indrindra ary ny fanavaozana matetika ary koa ny fampiroboroboana maimaimpoana maimaimpoana dia misy dikany amin'ny fanohizana ny fampiroboroboana azy.
Revolisiona sivilizasiôna 2
Miverina amin'ny foto-kevitry ny sivilizasiona, na dia amin'ity tranga ity aza ny lohateny dia feno tokoa ka ny tanjona faratampony dia ny hahatratraranao voninahitra eo amin'ny sehatra rehetra. Manampy anao amin'ny diplaomasia dia tokony hahatratra ny tsara indrindra amin'ny siansa, kolontsaina, fivavahana ary zavakanto miaramila ianao.
Amin'ity tranga ity dia ny sehatra dia mitovy manerantany, na dia ny tena tokony hatao aza dia ny mitady ny fanjakan'ny nokleary amin'ny sehatra manerantany. Ny marina dia gaga amin'ny foto-kevitra tsotra izy io, saingy raha ny tena izy dia mandresy mpampiasa bebe kokoa. Raha te hanandrana ny fanjakan'izao tontolo izao ianao, angamba ny fampidinana an'ity lohateny ity no tena atoro anao.
Na dia ao anatin'ny hevitra iray aza io ratsy tarehyNy marina dia izao: ny famindrana an'izao tontolo izao amin'ny bibikely dia toa mahomby amin'ny iPhone, ary izany indrindra no momba an'io volavolan-dalàna io miaraka amin'ny vidiny ambany indrindra amin'ny App Store.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Ny lalao tetikady 10 tsara indrindra ho an'ny iPhone
Ny zava-maniry vs Zombies 2 dia havaozina amin'ny ambaratonga vaovao
Raiso ny Gay, "Tinder" manokana ho an'ny fiarahamonina pelaka